Arkiiyada Dhacdooyinka Bulshada »Jaamacadda Hodges
Category: Dhacdooyinka bulshada
Nolosha kambuyuutar, Dhacdooyinka bulshada
Ku Soo Biir Dabbaaldeggeena Cunnada Iyo Qofka Aan Ku Caawineyno bulshadayada oo aan caawinno kuwa kale! Jaamacadda Hodges waxay la shaqeysay Bangiga Cuntada ee Harry Chapin iyo Badbaadinta Xayawaanka ee Brooke, si ay u soo ururiyaan alaabada qoysaska tabaalaysan iyo saaxiibbadeenna dhogorta leh. Nagu soo biir adoo ku tabarucaya 1-da Juun - Juun 15-keeda, 2020. Waad Sameyn Kartaa A [...]	Read More
Waad Caawin Kartaa! Ururinta Gargaarka Duufaanta Dorian ee Bahamas
Shirkadaha Stilwell Enterprises iyo Jaamacadda Hodges waxay ku biirayaan dadaalada gargaarka ee Bahamas Duufaanta Dorian ayaa burburisay Bahamas, dadka deegaankaasina waxay aad ugu baahan yihiin gargaar. Jaamacadaha Hodges's Fort Myers iyo Naples xarumahoodu waa goobo laga dajiyo dadaalada gargaarka ee Bahamas. Waxyaabaha aan ururinno waxaa si toos ah loogu geyn doonaa Bahamas, waxaana iska leh shirkadda Stilwell Enterprises. Hodges [...]	Read More
Munaasabadda Zonta Maamuus Iyo Awoodsiin Guul
Naadiga Zonta ee sharafta iyo xoojinta Naples oo lagu qabtay jaamacada Hodges wuxuu ahaa guul weyn! Hoggaamiyeyaasha bulshada iyo kaqeybgalayaashu waxay ku soo urureen Xaruntayada Naples 18-kii Abriil, 2018, si ay wax badan uga bartaan awoodsiinta naftooda iyo bulshadooda munaasabadda sharafta iyo awood-siinta Zonta. Hodges 'wuxuu ku faraxsan yahay martigelinta munaasabaddan iyada oo lala kaashanayo [...]	Read More
Shaqaalaha Jaamacadda Hodges waxay ku deeqayaan in ka badan 500 oo Toys oo Ciyaaraha loogu talagalay cows
Shaqaalaha Jaamacadda Hodges waxay ugu deeqayaan in ka badan 500 oo Toys Toys loogu talagalay cows Sannad kasta, shaqaalaha Jaamacadda Hodges waxay u dabaaldegaan ciidaha iyagoo carruurta siiya. Sannadkan, waxay si weyn u fureen qalbiyadooda waxayna ku deeqeen in ka badan 500 oo toy oo loogu talo galay Alaabada loogu talagalay Tots-ka. “Deeqsinimada dhamaan kuliyadeena iyo shaqaalaheena waa farxad,” ayuu yiri Dr. John Meyer, madaxweynaha, [...]	Read More